Studio fananganana sary mihetsika sasany izay mendrika ny ho fantatra | Famoronana an-tserasera
Tsy zava-baovao izany ankehitriny Famoronana fihetsehana Ity dia fangatahana iray somary goavambe ataon'ny mpiasa efa miasa amin'ny dokam-barotra, ny famolavolana sary ary ny zavakanto, ary koa ireo mpianatra amin'ny sehatra iray ihany.
Na izany aza, inona no azonao ampiasaina amin'ny reference nandritra io fotoana nahazoana aingam-panahy io? Noho io fanontaniana napetraka matetika io dia hiresaka momba ny studio fanaovana sary mihetsika dimy isika amin'ity lahatsoratra ity.
1 Mihaona studio sary mihetsika 5 tsy mampino
1.1 Ant Giant
1.3 Cub studio
Mihaona studio sary mihetsika 5 tsy mampino
Manaraka izany dia holazainay aminao ny dimy sary mihetsika izay tokony ho fantatrao
Ity 2017 ity, Giant Ant dia nahavita fanolorana traikefa nandritra ny folo taona tetikasa maro tsy mampino ao anatin'ny faritra "Motion design".
Raha misy zavatra manasongadina ny asan'ity studio ity dia ny isan-karazany ny tetik'asa izay tanterahin'izy ireo, nanomboka mitantana manambatra ny mombamomba ny mpanjifa tsirairay miaraka amin'ny fikitihan'ny matihanina izay manao ny tetikasa amin'ny fomba mahavariana.
Toy izany koa, ny fomba fifandraisan'izy ireo matetika amin'ny tambajotra sosialy, dia manondro fa misy a fahatsapana efa mahazatra ao anatin'ity fandalinana ity, toy ny hoe anisan'ireo namana mifanohana foana izy ireo.
Ny sasany amin'ny mpanjifa Giant Art dia: ny sehatra Slack, TNT, Costa del Mar, Asana, Google, Mailchimp, fahasalaman'ny lehilahy, sns ...
Manana foibe any New York, Los Angeles, ary iray hafa any Sydney, ity studio ity ahitana vondrona artista, mpamorona ary mpitantara tantara. Buck, dia misongadina ihany koa amin'ny karazana tetikasany, na izany aza, ny zavatra mahasarika ny ankamaroany dia matetika tsy ny forongony fotsiny, fa koa ny kalandrie momba ny sarimiaina.
Toy ny asanao, ny portfolio client Tsy mampino izany, satria ao anatin'izy ireo ny Nike, Google, Instagram, Facebook ary IBM.
Fianarana iray izay nateraka tamin'ny firaisana amin'ny tarehimarika roa lehibe amin'ny famolavolana, Bem Skinner sy Fraser Davidson.
Nanao akanjo i Davidson traikefa mihoatra ny 10 taona ao anatin'ny indostrian'ny sarimiaina ary nahavita nahazo loka maro noho ny sarimiaina. Ho fanampin'izay, niara-niasa tamin'ny marika marika manan-danja indrindra manerantany izy.
Skinner kosa dia manana ny traikefa efa an-taonany mahery, mifantoka bebe kokoa amin'ny SEO, UX, marketing an-tserasera ary ny Fampisehoana, ao anatin'ny saha mifandraika amin'ny endrika.
Ireo izay mahalala an'i Davidson dia manamarika izany misy fitaomana lehibe momba azy isaky ny tetikasa notanterahin'i Cub, tsy noho ny hatsarany ihany fa ho an'ny fomban'ireo sarimiaina. Na izany aza, manana ny fizakan-tena ny ekipa iray manontolo rehefa manatanteraka ny asany, izany no iray amin'ireo antony mahatonga ny Cub Studio ho lehibe tokoa.
Anisan'ireo mpanjifa nananan'ity fandinihana ity ny orinasa avy amin'ny sehatry ny fanatanjahantena, toa ny NFL, Fox Sports, ESPN, Strava, ary koa ny mpanjifa ivelan'ity sehatra ity toa ny Dropbox, Prizeo, Facebook, Expedia, sns ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Studio fananganana sary mihetsika sasany izay mendrika ho fantatra tokoa
Torohevitra hanatsarana ny zava-bitanao amin'ny maha-mpamorona anao